ASUR inozivisa yakazara yevatakuri traffic muna Zvita 2017
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » ASUR inozivisa yakazara yevatakuri traffic muna Zvita 2017
Airlines • nhandare yendege • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Mexico News • Kuputsa Kufamba Nhau • Kuputsa US News • Colombia Breaking News • nhau • ushanyi • kutakura
Yevatakuri traffic yakakwira 6.1% muMexico, uye yakaramba 23.9% muSan Juan uye 12.3% muColombia.
Grupo Aeroportuario del Sureste, SAB de CV, boka renyika dzendege rine mashandiro muMexico, US neColombia, nhasi vazivisa kuti huwandu hwevapfuuri muna Zvita 2017 hwakadzikira 3.5% kana uchienzaniswa naZvita 2016. Traffic revakwiri rakakwira 6.1% muMexico, uye yakaramba 23.9% muSan Juan uye 12.3% muColombia.
Ichi chiziviso chinoratidza kuenzanisa pakati paZvita 1 kusvika Zvita 31, 2017 na2016. Zviyero zvakaunganidzwa zvinoratidza kuenzanisa pakati paNdira 1 naDecember 31, 2017 na2016. Vatakuri vemigwagwa pamwe nevazhinji vevatyairi vekunze vanobviswa kuMexico nekuColombia.
Ziva kuti kudzikira kwemotokari dzevapfuuri paSan Juan Airport kunoratidza kukonzereswa neDutu reMaria, rakarova chitsuwa ichi musi waGunyana 21, 2017. KuColombia, traffic yevatakuri yakakanganiswa nekuramwa kwevatyairi vemunharaunda kune mukuru anotakura nyika dzese.